कसरी रखरखाव र सेवाको लागि वेबसाइट बनाउने?
विक्ससँग, विश्वभरि 131 मिलियन भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसाय इन्टरनेटमा राख्छन्। Wix ले प्रयोगकर्ताहरूलाई सबैभन्दा छिटो र धेरै व्यावहारिक तरिकामा एसईओ-अनुकूल वेबसाइट सिर्जना गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। तपाइँ कुनै पनि क्षेत्रको लागि मर्मत वा सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइट चाहिन्छ। त्यसैले मैले Google मा एक वेबसाइट कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ कि पहिलो पृष्ठमा भेट्न सकिन्छ? यस लेखमा हामी यस मुद्दाको जाँच गर्नेछौं। कसरी रखरखाव वा सेवाको लागि वेब साइट सेट अप गर्नुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोस्, तपाईले Wix सँग आफ्नो वेबसाइट सिर्जना गर्नको लागि कोडिङ जान्न आवश्यक छैन, तपाइँ आफ्नो वेब साइट सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसले सोशल मिडिया खाता ड्र्याग र ड्रप विधि सिर्जना गर्दछ। तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया खाताहरू सजिलै संग आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट कसरी गर्ने र भिडियो वर्णन। तपाईको आफ्नै वेबसाइट बनाउनुहोस्।
यहाँ केहि क्षेत्रहरू छन् जहाँ तपाइँ वेबसाईटहरू Wix सँग रखरखाव वा सेवाका लागि बनाउन सक्नुहुनेछ;
निर्माण कम्पनीको लागि वेबसाइट
वाहकको लागि वेबसाइट
ग्लास पिपिङ कम्पनीको लागि वेबसाइट
फर्श कार्यको लागि वेबसाइट
कार गेराजको लागि वेबसाइट
शिपिंग कम्पनीको लागि वेबसाइट
घर सुधारको लागि वेबसाइट
Repairman को लागि वेब साइट
सुपर फ्रेट अग्रेषण कम्पनीको लागि वेबसाइट
प्लम्बरको लागि वेबसाइट
सफाई सेवाको लागि वेब साइट
कालीन धोने र सफाईको लागि वेबसाइट
तालाबन्दीको लागि वेबसाइट
कम्पनी वेबसाइट सफा गर्नुहोस्
ड्राई क्लीनिंगको लागि वेब साइट
गृह सजावट कम्पनी वेबसाइट
कार वाश सेवाको लागि वेबसाइट
ओटो मर्मत पसलको लागि वेबसाइट
तपाई सजिलै संग ती क्षेत्रहरू भन्दा कुनै पनि मर्मत र सेवाको लागि एक वेबसाइट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गर्नु आवश्यक छ Wix ADI (Wix कृत्रिम डिफाइनल डिफाइन खुफिया) सँग वेबसाइट बनाउनुहोस् वा Wix को तयार वेबसाइट टेम्प्लेट सम्पादन गर्नुहोस्। Wix ले तपाईंलाई2वटा विकल्पहरूसँग तपाईंको सम्मानित प्रयोगकर्ताहरूमा वेबसाइटहरु सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ।
अब यो चरणले यो कदम सिक्न दिनुहोस्।
1. Wix ADI (Wix कृत्रिम डिजाइन खुफिया) रखरखाव र सेवा सेवा वेबसाइट बनाउन।
30 सेकेण्ड पछि Wix ग्राहक, जब तपाइँ वेबसाइट स्थापना संग Wix ADI छनौट गर्नुहुन्छ, Wix प्रणालीले तपाईंलाई केहि जानकारीको लागि सोध्नेछ। तपाईंले अनुरोध गरेको रूपमा यो जानकारी लेख्नु पर्छ। त्यसपछि, तपाइँ एकल कुञ्जी थिचेर आफ्नो वेबसाइट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यहाँ क्लिक गरेर Wix ग्राहक बन्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरण वेबसाइट स्थापना;
हो, हामीले स्वचालित रूपमा Wix ADI सँग हाम्रो वेबसाइट सिर्जना गरेका छौं।
वििक्स सम्पादकको साथ तयार वेबसाइट सिर्जना गर्नुहोस्
Wix सम्पादकसँग, तपाईं Wix वेबसाइट डिजाईन टोली द्वारा बनाईएको तयार वेबसाईट टेम्प्लेटहरू अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ जुन देशमा लक्ष्य देश भाषामा। तपाईं Google मा तपाईंको वेबसाइट एसईओ सेटिंग्स चरण द्वारा चरण बनाएर पृष्ठ हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, प्लम्बर वेबसाइट स्थापना गर्दै;
Wix सँग रखरखाव र सेवा वेबसाइट सिर्जना गर्न सजिलो छ।
यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट र व्यवसाय Google मा पहिलो पृष्ठमा हुन चाहानुहुन्छ भने, हामी दृढतापूर्वक सिफारिस गर्छौं कि तपाईले एक Google व्यवसाय रजस्टर बनाउनुहुन्छ। यस तरिकाले तपाईंको वेबसाइट स्थानीय गुगल खोजीहरूमा पहिलो पेजमा देखा पर्नेछ। तपाईं मेरो व्यवसाय Google मा रजिस्टर गर्न यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
वेब साइट को लागि एसईओ सेटिंग्स बनाइयो तपाईं Wix संग बनाइयो एकदम सरल छ। Wix एसईओ जादूगर संग, तपाईंको वेब साइट पेजहरु को निर्माण पछि, तपाईं थोडा स्कैन गरेर आफ्नो सबै कमिटिहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम चरणमा तपाई आफ्नो वेबसाइट Google मा पठाउन सक्नुहुन्छ।
वेब साइट मूल्यहरु
तपाईं Wix वेबसाइटको स्वामित्वमा 2-वर्ष, 1-वर्ष वा मासिक भुक्तानी विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ एक वेब साइट बनाउनु भएपछि, तपाईंलाई एक डोमेन हुनु पर्दछ। यदि तपाइँ वार्षिक वार्षिक भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, Wix प्रणाली तपाईंलाई 1 वर्षको निःशुल्क डोमेन दिनेछ। साथै, $ 100 को लायक Google ऐडवर्ड्स वाउचर फेरि तपाईं एक उपहार हो। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि जब तपाइँ एक Wix प्रीमियम प्याकेज खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं 14-दिनको परीक्षण अवधिको हकदार हुनुहुन्छ। 14 दिन भित्र, तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो भुक्तानी फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
30 सेकेन्डमा Wix लाई सब्सक्राइब गर्न, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। वा तपाईं छविमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।